भुवन केसीद्वारा जियाको मुटु छियाछिया भिडियो सहित - Muldhar Post
पत्रपत्रिका खबर २०७७, १२ फाल्गुन बुधबार 124 पटक हेरिएको
कुनै समय अभिनेता भुवन केसी र जिया केसी लिभिङ टुगेदरमा थिए । उनीहरु लिभिङ टुगेदरमा रहेको हल्ला व्यापक चलेको थियो । संचारमाध्यमले पनि उनीहरुको सम्बन्ध ठूलै स्थान दिएको थियो । केही वर्षदेखि यो चर्चित लभ बर्ड भुवनको पुरानो बानेश्वरस्थित घरमा बस्दै आएका थिए । यद्यपि लिभिङ टुगेदर र प्रेमसम्बन्धका बारेमा न भुवन केही बोल्छन्, न जिया नै मुख खोल्छिन् ।गुपचुप रूपमा डेटिङमा रमाइरहेको यो जोडीको सम्बन्ध नेपाली फिल्मी बजारमा छताछुल्ल फैलिएको छ ।
साथी मात्र हौं भन्दै पन्छिने जिया र भुवनले देश–विदेशको भ्रमण सँगै गरे पनि किन आफ्नो सम्बन्धलाई साथीको नाम मात्र दिइरहेका छन्, त्यो उनीहरूलाई मात्र थाहा छ । अहिले भने उनीहरुको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर बाहिर आएको छैन । कुनैसमय विमानस्थल देखि अन्य ठाउँहरुमा सँगै देखिने यो जोडी अहिले क्यामेरामा कैद हुदैँनन् । फिल्ममा चासो देखाउनेहरु के भुवनले जियाको मुटु छियाछिया बनाएकै हुन् त भन्दै ठट्यौली शैलिमा प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
भुवन–जिया सम्बन्ध: के हो साइनो ? केहि समयअघि जापानको एयरपोर्टबाट नेपाली कलाकारको तस्बिर धमाधम बाहिरियो । एक तस्बिरमा अनमोललाई दायाँ पार्दै उभिएका थिए, अभिनेता भुवन केसी। भुवनको दायाँपट्टि थिइन्, हिरोइन जिया केसी। जापानमा भएको सूर्य इन्टरनेसनल अवार्डमा सहभागी हुँदै गर्दा खिचिएको सो तस्बिरमा आयोजक पनि अटाएका थिए। तर, दर्शकको ध्यान अन्य कलाकारमा भन्दा जिया र भुवनको जोडीले तान्यो। किनकि यी दुई सम्बन्धमा धेरैको चासो जो छ ! चासोको कारण हो, न यो विवाहित जोडी हो, न सार्वजनिक रुपमा प्रेमी–प्रेमिकाका नै स्वीकार गरेका छन् तर यो जोडी प्रायः सँगै हुने मात्रै हैन, सँगै बस्छन् पनि । भिडियो तल छ
जापानको एयरपोर्टबाट त तस्बिर मात्र बाहिरिएको हो, भुवन र जियाको। त्रिभुवन विमानस्थलको दृश्य त अझ चाखलाग्दो छ। राति ८ बजेको हुँदो हो। विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा एउटा ट्याक्सी रोकियो। युट्युबरको क्यामेरा ट्याक्सीतिर फोकस भएपछि हिच्किचाउँदै एउटा जोडी बाहिर निस्कयो । त्यो जोडी भुवन र जियाको थियो। भुवन क्यामेराबाट घेरिएपछि जिया मिडियाबाट तर्किइन्। एकैछिनमा हराइन्। जापान जाने प्लेनमा दुवै सँगै थिए ।
जिया केसी कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्म ‘क्याप्टेन’ विवादित सूर्य इन्टरनेसन अवार्डको मनोनयनमा परेको थियो। आफूले निर्माण गरेको फिल्म नै मनोनयनमा परेपछि भुवनसँग जापान पुग्न जियाका लागि ठूलो विषय रहेन। पत्रकार श्रीधर पौडेलले खिचेका यी दुवैको तस्बिरले नै उनीहरुको निकटताको रहस्य खुलासा गरेको थियो। तर उनीहरुको सम्बन्धबारे अहिले पनि ‘हामी मिल्ने साथी मात्रै हौं’ भनेर दुवैले झुक्याइरहन्छन् । भिडियो तल छ
के साथीमै सीमित छ त यी दुईको सम्बन्ध ?: नाम नखुलाउने सर्तमा भुवन निकट स्रोतका अनुसार जिया भुवनको सिनामंगलमा रहेको घरमै बस्छिन्। भान्सादेखि सबै कुरामा श्रीमतीझैँ सक्रिय भूमिका छ जियाको। घरमा चिनेको मान्छे उपस्थित हुँदा जिया देखा पर्छिन्। घरमा नचिनेको कोही आइहाल्यो भने देखा नै पर्दिनन्। अनमोल जियालाई ‘जिया दिदी’ भनेर बोलाउँछन्। उनको फिल्म छनोटमा सल्लाहकारको भूमिका हुन्छ जियाको । अनमोलकी आमा सुस्मिता बम्जनसँग भुवनको डिभोर्स भएपछि एक्लिएका भुवनले जियाको साथ पाएका हुन्। उनीहरु दुवै एउटा क्यासिनोमा मध्यरातमा सँगै पुगेपछि यी दुईको सम्बन्ध सार्वजनिक भएको थियो।
दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको रहञस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ । भुवनको दाम्पत्य जीवनलाई फर्किएर हेर्दा मागि विवाह टिञकेन, भाञगी विवाह पनि टिकेन । दुवै विवाह टुञट्नुमा भुवनकै हात छ भन्ने आञरोप पनि नलागेको होइन । भुवनकी पहिलो श्रीमती थिइन् विजया मल्ल । उनीसँग भुवनले माञगी विवाह गरेका हुन । छोरी काजल र विवेकको जन्मपछि भुवन र विजयाबीचको सम्बन्धमा फाञटो आएको हो । विजया सम्बन्ध–विञच्छेद गरी छोरा र छोरी लिएर अमेरिका गइन् । मागी विवाह नटिकेपछि भुवनले भाञगी बिहे गरे सुस्मिता बमजनसँग । विवाहपछि सुस्मिताले चलचित्रमा काम गरिन् । उनी पहिलो चलचित्रबाटै हिट भइन् ।
सुस्मिताले ‘करोडपति’ बाट डेब्यु गरेकी हुन् । भुवनसँगको विवाहपछि सुस्मिताले छोरा अनमोललाई जन्म दिइन् । सुस्मिताको व्यवसायिक जीवन राम्रो गतिमा अघि बढिरहेकै बेला भुवनसँग भने ठाञक ठुञक पर्न थाल्यो । बिस्तारै उनीहरूको सम्बन्ध बिञग्रँदै गयो । अन्ततस् उनीहरू कानुनी रूपमै अलग भए । सुस्मिताको पछिल्लो चलचित्र पिंजञडा ब्याक अगेन केही समयअघि मात्र प्रदर्शनमा आएको थियो । यो जोडीका एक मात्र सन्तान अनमोल केसी अहिलेका चर्चित अभिनेता हुन् । भुवनले दुईवटा विवाह नटिकेकै कारण तेस्रो विवाहप्रति अनिञच्छा देखाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनी जियालाई एकदमै मिल्ने साथीमा सीमित राख्न चाहन्छन् ।
भुवन, उतै जियाः भुवन जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ जिया पुगेकै हुन्छिन्। भुवन पनि कुनै कार्यक्रममा जियालाई नलिई जाँदैनन्। फिल्मको प्रिमियरमा होस् या अन्य विदेशी फिल्म प्रदर्शनको कार्यक्रम होस् अथवा अवार्ड नै किन नहोस् ! भुवन–जियासँगै हुन्छन् । भुवनसँग निकट भएपछि उनको फिल्मी यात्रा भने ठप्पै भयो। पहिल्यै उनीद्वारा अभिनित फिल्म त्यत्ति चलेनन्। उदार अंग प्रदर्शनले पनि डिमान्ड नबढाएपछि उनी भुवनसँगको सम्बन्धै रमाउन थालिन् । उनको अभिनययात्रा ठप्पै भयो। भुवनले पछिल्लो पटक जियालाई आफ्नो फिल्म ‘क्याप्टेन’को कार्यकारी निर्मातासमेत बनाए र असफल हिरोइनबाट निर्माताको रुपमा उदाइन् जिया ।
यसरी कसियो सम्बन्धः जिया सन् २०१३ मा ‘हो यही माया हो’ फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी थिइन् । डेब्यु फिल्मबाट उनी चर्चामा आइन्। फिल्मका लागि अङ्ग प्रदर्शन गर्नसमेत तयार भएपछि उनी चर्चामा रहिन्। फिल्ममा अंग प्रदर्शनमा उनी निक्कै उदार थिइन्। उनले खेलेको फिल्म ‘एटिएम’ त सेन्सरमै पर्याे । सोही वर्ष यी दुवै निकट हुँदै गए। ‘एटिएम’कै प्रचारताका जियाले ‘आइ लभ भुवन केसी’ भनेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘मलाई उहाँ एकदम मनपर्छ। एउटा कलाकारको हिसाबले उहाँ मनपर्छ। म उहाँको ग्रेट फ्यान हुँ।’
जियाले जब मिडियाबाट नै खुलेआम भुवनलाई मन पराउने घोषणा गरिन्, भुवनले पनि आफ्नो पनि ग्रिन सिग्नल पठाइहाले। बिस्तारै यी दुई नजिकिए। त्यसपछि त यी दुई विभिन्न क्याफेदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ देखिन थाले। भेट बिस्तारै बाक्लिँदै गयो तर सार्वजनिक रुपमै आफ्नो निकटता भने देखाउँदैनथे। अहिले भने दुवै सार्वजनिक कार्यक्रममा नारिएर हिँड्न धक मान्दैनन्। डिसी नेपालसँगको एक अन्तरवार्तामा जियाले ‘भुवन केसीसँग बिहे हुन पनि सक्छ, भविष्य कसले देखेको छ र ?’ भनेकी थिइन ्। जियाले बिहेको भविष्यवाणी गरेको पनि ६ वर्ष भइसक्यो। उनी भुवनकै घरमै बस्छिन्। तर बिहे भयो कि लिभिङ टुगेदरमै हुन्, रहस्यमै छ ।
अनौठो प्रेमकथाः उमेरले ६० वर्ष नाघेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् । केसी चलचित्रका सर्वाधिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् । उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने अञसफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् ।
भुवन बिन्दास स्वभावका अभिनेता हुन । अनमोल चम्किएसँगै भुवन निकै खुसी छन् । केसी भन्छन्, ‘अनमोल नेपालको पहिलो त्यस्तो सेलिब्रेटी हो, जसको जत्तिको स्टारडम अहिलेसम्म कसैले कमाउन सकेन । अनमोलको कामप्रति आफू निकै खुसी र सन्तुष्ट भएको उनी बताउँछन् । भुवनले अनमोललाई आफ्नो इसाञरामा चलाइरहेको आञक्षेप पनि नलञगाइने होइन, तर भुवन भन्छन्, ‘अनमोल मेरो छोरा मात्र हो, बाहिरी दुनियाँका लागि ऊ कलाकार हो, उसलाई अभिभावकका हिसाबले सम्झाउने र सुझाव दिनेबाहेक म अरू कुनै हञस्तञक्षेप गर्दिनँ । उसको जीवनमा उसकै डिसिजन चल्छ ।’ भुवनका अहिले दुई सारथि छन्ः अनमोल र जिया । यी दुई पात्रले भुवनलाई परिवारमा कसैको अभाव महसुस हुन दिएका छैनन् । खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको यो जोडी औपचारिक रूपमा विवाह गरेर कहिले श्रीमान्श्रीमतीको हैसियतमा पुग्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्छ । उनीहरूको सम्बन्धका जानकार निकटतम व्यक्तिहरू पनि दुई प्रकारका टिप्पणी गर्छन् ।
कतिपय जिया र भुवनको विवाह हुने सम्भावना प्रबल छ भन्छन् भने कतिले उनीहरू अहिले जुन हिसाबले सम्बन्ध अघि बढाइरहेका छन्, त्यसमै सीमित हुन्छन् पनि भन्छन् । उनीहरूको घरमा निरन्तर पुग्ने एक चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘जिया र भुवनजीलाई मैले धेरै समयदेखि साथै देखिरहेको छु, विवाह नभए पनि उहाँहरूबीच राम्रो तालमेल भए सक्किगो नि । कुनै बेला जियाले आफू भुवनसँग विवाह गर्न तयार रहेको बताउँदा त्यसलाई ठञट्टाका रूपमा लिइएको थियो । भुवनले पनि उक्त टिप्पञणीमा जियाले फ्यानका हिसाबले भनिन् होला भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । जियाले २०७२ सालको दसैंमा भुवन केसीको घरमै पुगेर सँगै टीका लगाउनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको थियो भने कतिपयले उनीहरूको विवाह भैसकेको आशंञकासमेत गरेका थिए । जियाले केही वर्षअघि नै भुवनलाई मन पराउँछु भनिसकेकी थिइन् ।